Mpanamboatra sy mpanondrana mivantana any Shina ve ianao?
Eny, isika. Mpanamboatra OEM & ODM eo an-toerana izahay, manana ny orinasa manokana sy ny tranokalan'ny Varotra iraisam-pirenena.
Aiza no misy ny orinasanao?
Ny tranokalanay dia mahita ao an-tanànan'i Yixing, Faritany Jiangsu, Sina. Mandeha 2ora eo ho eo amin'ny fiaran-dalamby avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Shanghai mankany an-tanànantsika. Miarahaba anao mazoto mitsidika ny orinasa izahay na rahoviana na rahoviana.
Ahoana no fomba fividianako ny entanao?
Alefaso aminay ny fanontanianao (famaritana, sary, fampiharana) amin'ny alibaba, mailaka, Wechat anay. Azonao atao koa ny miantso antso mivantana momba ny zavatra takinao, hovalianao izahay ASAP.
Amin'ny firy no fotoana firaharahana?
Tokony ho 25-30 andro eo ho eo aorian'ny santionany voamarina sy raikitra no raisina. Raha mila haingana ny entana, azafady mba lazao anay ary afaka manandrana ny tsara indrindra izahay mba hanomezana laharam-pahamehana anao.
Ahoana no fomba ahazoako santionany aminao?
Raha manana tahiry ho an'ny modely ilainao izahay dia afaka mandefa anao ilay santionany maimaimpoana mivantana. Fa raha mila CUSTOMISATION ianao, dia homena vola ny sampling. Ary amin'ireo fomba roa ireo dia mila vesatra anao ny entana. Modely azo alefa amin'ny alàlan'ny Fedex, UPS, TNT, DHL, ect.
Ahoana no fomba handoavako anao?
Ho an'ny entana famokarana faobe, mila mandoa vola 30% ianao alohan'ny famokarana sy ny fifandanjana 70% amin'ny fandefasana. Ny fomba mahazatra dia T / T mialoha. Ny fifandanjana amin'ny alàlan'ny L / C, DP eo imasony dia ekena ihany koa.
Azoko atao ve ny manamarina kalitao kalitao alohan'ny andefasana?
Eny, na ny tenanao na ny mpiara-miasa aminao, na ny fety fahatelo dia raisina an-tànana amin'ny orinasa izahay hanao ny fisafoana alohan'ny fanaterana.
Ahoana ny entana aterina amiko?
Ho an'ny habetsahany kely, manoro hevitra izahay handefa amin'ny alàlan'ny mpampita, toa an'i Fedex, UPS, DHL, ect.
Ho an'ny ankamaroan'ny habetsahana dia manoro hevitra izahay handefa amoron-dranomasina. Afaka mandefa entana any amin'ny Fandefasana Filazana (vidin'ny FOB) ianao. Na raha tsy manana iray ianao dia afaka manonona ny vidin'ny CIF ianao.